Imemori iyonke. UDavid Baldacci uqala uthotho olutsha. | Uncwadi lwangoku
Imemori iyonke. UDavid Baldacci uqala uthotho olutsha.
UDavid Baldacci udala umlinganiswa omtsha kwi Imemori iyonke.
Kungekudala bendithetha ngalo UDavid Baldacci kunye Inoveli yesibini ukusuka kwi-trilogy yakhe malunga nearhente uJohn Puller. Phantse ngaxeshanye kwapapashwa esi sihloko sitsha, Imemori iyonke, Aqala ngayo umbhali waseMelika olunye uthotho oluthembisa. Enkulu yohlobo kunye nokuzala kakhulu, izimvo zakhe kunye neeplani zibonakala ngathi azipheli.
El protagonista Ukusibonisa kwakhe yahluke ngokupheleleyo kwi-arhente ephezulu ye-Puller, iprototype phantse yeqhawe. Ebutsheni bakhe, UAmos Decker unobungozi obukhulu kakhulu. Ukusukela ngoko kuya kubakho hyperthymesic kwaye ngokuqinisekileyo ayizukuphinda ifane. Kodwa unayo eyona ntlekele imbi. Kwakhona ibali ukuba ifunda ikhefuzela.
1 Ingaba ingantoni
3 Kutheni uyifunda
UAmos Decker wayekuphela komfana waseBurlington, idolophu yakowabo, ukuba abe ngumdlali webhola oqeqeshiweyo. Kodwa umsebenzi wakhe waphela ngaphambi kokuba uqale. A ukubetha ngobundlobongela entloko ngokuchasene naloo mbangi wamshiya ephantse wafa kwaye wamsusa emdlalweni ngonaphakade. Kodwa ikwamshiya neziphumo ezithile: i hyperthymesia (ngekhe ulibale nantoni na) kunye synesthesia (jonga ngemibala).
Kwiminyaka engama-XNUMX kamva, uyagula intlekele enkulu. Ngaba umhloli wamapolisa kwaye xa ebuyela ekhaya ngobunye ubusuku ufumana wabulawa usibali wakhe, umfazi wakhe, nentombi yakhe. Umvandedwa mkhulu kangangokuba uDecker ushiya amapolisa, angene kuxinzelelo olunzulu kwaye aphulukane nayo yonke into, kubandakanya nendlu yakhe. Phantse uhlwempuzekile, akafumani ngokwamkela imisebenzi ngamanye amaxesha Umcuphi wabucala.
Kodwa ngaphezulu konyaka, indoda ezinikezela kumaPolisa kunye Uyavuma ukuba ungumbhali wolwaphulo-mthetho. Ngaxeshanye, Ukubulawa kwabafundi nootitshala kwisikolo esiphakamileyo saseBurlington. Umphathi wangaphambili we-Decker uza kukucela ukuba usebenzisane nabo. UDecker ukwabona nethuba lokufumanisa ukuba kwenzeka ntoni kanye kanye kusapho lwakhe.
Njengoko iphela, kubonakala kum ukuba UAmos Decker Akayi kuba kuphela umlinganiswa ophambili kolu thotho, kodwa ngokuqinisekileyo yeyona nto inomdla kakhulu. Mde kakhulu, ungqine, uneendevu kwaye utyebe kakhulu. Kwiminyaka engamashumi amane anesibini, ujongeka eneminyaka elishumi, njengoko watshoyo, ngokuyeka ukukhathalela emva kwentlekele athe wehlelwa yiyo. Ngamaxesha athile Umntu wesithathu obalisa uxubana nelizwi lakho kumntu wokuqala kwaye usisondeza kuye.
Amandla akhe awafumeneyo, okwahlukileyo isifo se-savantismBaye bachaphazela nokuziphatha kwaye, ngandlela thile, ulahlekelwe yimfesane. Uphantse waphulukana nomnqweno wokuphila kwaye simbona ethathela ingqalelo suicidio kwizihlandlo ezimbalwa. Ngamanye amagama, kuthi abo banendawo ethambileyo yabalinganiswa abonzakeleyo, uAmos Decker ngomnye wethu amaqhawe ifanelwe ukuqatshelwa. Ubetha ezantsi ematyeni, kodwa njengaye nawuphi na umlinganiswa olungileyo ochukunyiswe ngumdlalo weqonga, uninzi lohlobo, Uya kulwela ukufuna inkululeko. Kwaye ngokuqinisekileyo iyakubamba.
Naye, owayesakuba liqabane lakhe, umcuphi Lancaster, Ukwaluka kwakhona iimpawu zesibini zokunethezeka, ezithembekileyo kunye nesibindi. Kwaye bajoyine umphathi oqondayo tshintsha, iarhente yeFBI kunye naye uDecker uya kuba nee-pluses kunye nee-minuses zakhe, kodwa ekugqibeleni uya kuthi enze iqela elilungileyo. Y intatheli othe chu wangena kwindawo yesehlo, etsalwa bubuntu bukaDecker kunye nokunxibelelana phakathi kwentlekele yakhe kunye nokubulawa kwabantu kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo saseBurlington.
Kungenxa yokuba uBaldacci uyazi ifomula yempumelelo kakuhle kwaye apha uyenza ukuba iphinde isebenze. Ukukhawuleza ngokukhawuleza kunye nesakhiwo esihle kwizixhobo ezakhiwe kakuhle. Kwaye a Umbulali wokuqala, Imiyalezo yakhe eya kuDecker igcina ukukrokra kwaye iyamangalisa de bafumane unxibelelwano phakathi kwabo bonke.
Ukuba kufuneka ndibeke peroKuya kuba njalo Ndifuna ngaphezulu. Nguye lowo final Ndiza kushiyeka ndisiqhwala, ndinemvakalelo yoku gijima kwakhona. Kodwa ngaphandle koko, ukufunda kulula, kuyinoveli kuyonwabisa kakhulu Sele ndimamkele u-Amos Decker njengomnye wabalinganiswa endibathandayo bonyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Imemori iyonke. UDavid Baldacci uqala uthotho olutsha.
USterling Hayden. Umdlali ophawulweyo, umatiloshe kunye nombhali.
I-Decalogue yombali obalaseleyo, nguHoracio Quiroga